ဓိပ်ပာယျနှငျ့တက်တူး - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo ဇြန္လ 23, 2016
ဂျပန်တက်တူးအဓိပ္ပါယ်များနှင့်ရည်ရွယ်ချက်တွေအများကြီးနှင့်အတူကျော်ကြားဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါဂျပန်တက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးကိုယ်စားပြုသောပစ္စည်းများကိုယင်း Koi ငါးနှင့်နဂါးတူသောသင်္ကေတဇာတ်လမ်းများကိုပြောပြရန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ နဂါးစည်းစိမ်ဥစ္စာ, ရက်စက်ခြင်းနှင့်ခွန်အားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ သငျသညျ enchanting ဖြစ်ကြောင်းတက်တူးနှင့်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အထူးသဖြင့်ထူးခြားဆန်းပြားသောသူတို့ကိုမြင်သောအခါ, သင်တက်တူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုမေးရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်။ သငျသညျကိုရပ်တန့်နှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များဝယ်လိုအားချင်အောင်သာအနည်းငယ်တက်တူးရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတက်တူးတစ်ခုမှာမူကွဲနှင့်စတိုင်များလာသောနဂါးတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးရလွယ်ပြီးခေတ်ဆန်သောရေးဆွဲသောလမ်းကိုသင်ထူးခြားဆန်းပြားနဲ့လှပတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၏တန်ဖိုးထားချန်ထားမည်။
Koi ငါးအရွယ်အစားနှင့်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူအရောင်ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံ၏နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဝတ်ထားတချို့လူတွေကဒါဟာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့အရာအားလုံးပွင်ဖြစ်သွားကြောင်းသူတို့ကိုအာမခံရန်အတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်နေချိန်မှာသူတို့က, သူတို့ကမှင်၏အသုံးချနေဖြစ်ကြောင်းရင်ဆိုင်နေရတိုက်ပွဲ၏ကပြောပါတယ်။ ဒါဟာခင်မင်မှု, အသည်းအသန်မေတ္တာ, လွတ်လပ်ရေး, ပါဝါ, ကောင်းသောကံ, ရှည်သောအသက်, စည်းစိမ်ချမ်းသာ, ပုလ်နှင့်တိုးဆိုလိုနိုင်ပါ။ သငျသညျကိုစိတ်ကြိုက်ချင်စေခြင်းငှါနက်နဲတည်မြဲအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်ကိုဂျပန်ကနေပိုပြီးတက်တူးရှိပါတယ်။
နှုတ်ခမ်း Tattoo ဓိပ်ပာယျ
နှုတ်ခမ်းကိုမကြာခဏရငျးနှီးနှင့် erogenous လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းကိုပြောဆိုရန်မင်းသမီးအားဖြင့်အသုံးပြုကြသည်။ ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ, စိတ်အားထက်သန်မှုသို့မဟုတ်ပုံစံအတွက်ခြယ်သနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီနမ်းစှဲစွန့်ခွာလိမ့်မည်ဟုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နေရာအများအပြားမှာခြယ်သနိုင်ပါတယ်စသည်တို့ကိုဝမ်းဗိုက်, တင်ပါး, လည်ပင်းကဲ့သို့ရင်းနှီးသောဖြစ်ကြောင်းဒေသများရှိလက်မှတ်ရေးထိုးသောအခါအနီရောင်နှုတ်ခမ်းနမ်းခြင်းနှင့်လိင်အယူခံအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ လျှာကိုအတူပါလာသောအနီရောင်နှုတ်ခမ်းမှော်အတတ်နဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အနီရောင်နှုတ်ခမ်းခေါ်ဆောင်သွားနှင့်အာရုံငါးပါး themes များအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဒါ့အပြင်သင်နှင့်အတူပေါင်းသင်းနိုင်မမညီကြောင်း themes များအကြောင်းပြောဆို။
နှုတ်တော်ထွက်အဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်သောအခါ, တန်ပြန်အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်ကြားဆက်ဆံရေးကိုကိုယ်စားပြုဖို့အသုံးပြုကြပါတယ်။ သူ၏နှုတ်ခမ်းတို့သည်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာသင်္ကေတရှိလူများဖော်ကျူးဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏အချစ်ဇာတ်လမ်းတခုအဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လာမယ့်အဆင့်အထိကစကားပြောဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီလျှင်, နှုတ်ခမ်းသင့်ရဲ့ပုံပြင်ကိုပြောပြရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ semicolon တက်တူးထိုးသေးငယ်တဲ့ဖြစ်နိုင်သည်ပေမယ့်အဓိပ္ပါယ်ကိုကြီးမားကြောင်းအရာတစ်ခုခုသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးအာရုံကိုအများကြီးဆွဲဆောင်ကအသုံးပြုသည်စွဲလမ်း, စိတ်ကျရောဂါ, ကိုယ်ပိုင်ဒဏ်ရာ, သတ်သေနှင့်လည်းဘဝနှင့်အတူပေါ်ရွှေ့ဖို့အလိုတော်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အသက်တာ၏အဓိပ္ပာယ်ကို ပတ်သက်. semicolon ဆွေးနွေးပွဲ, အဆုံးမလာတော်မူကြောင်းကိုလူတွေအာမခံရန်။ ယနေ့ semicolon အသုံးပြုမှုကိုအသက်ရှင်ဖို့ရုန်းကန်နေကြတဲ့သူတွေကိုသူတို့အဘို့အအသက်ရှင်ဖို့တစ်ခုခုရှိသည်သူတို့ကိုယ်သူတို့သတိပေးကြောင်းကိုတက်တူးထိုးသင်္ကေတဖြစ်လာပါတယ်။ အဲဒီမှာဒီတက်တူးထိုး၏ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားဖြစ်ကြောင်းနှင့်သင် semicolon တူချင်သလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ဖို့တဝတည်းဖြစ်ကြ၏။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသည် semicolon ကိုသင်တန်ဖိုးထားနိုင်မပိုကြီးပြီးပိုအဓိပ္ပာယ်ပြည့်တစ်ခုခုကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
သူတို့မှတက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုပြောပြရန်လုပ်နိုင်တဲ့မှင်ဒီတက်တူးထိုးရွေးချယ်တင်မြှောက်သူများ။ အဆိုပါတက်တူးထိုးဂန္သည်နှင့်သာသင့်ရဲ့အိပ်မက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လူလာအောင်နှိုးဆွနိုင်ပါတယ်။ သင်အမှန်တကယ်အခါသင်မှင်သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဤအကြောင်းတက်တူးလိုအပ်သောလှုံ့ဆော်မှုရရှိနိုင်သည်။ ဒါဟာ inking သူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အချုပ်အခြာအာဏာနှင့် ပတ်သက်. ကြာပါသည်။ ဒါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုထိန်းချုပ်နှင့်လည်းတက်တူးထိုးရှိခြင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး၏အပွင့်လင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်. ကြာပါသည်။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အစစ်ဆေးမှုများနောက်ဆုံးပေါ် semicolon တက်တူးဒီဇိုင်းအယူအဆအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
အိန်ဂျယ်တက်တူးထိုးကြောင့်ထိုသို့နှင့်တကွကြွလာသောခမ်းနားအဓိပ္ပါယ်များထူးဆန်းမဟုတ်ပါဘူး။ သငျသညျ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပါယ်များရှိကြောင်းလဲထောင့်မြင်ကြပြီရပါမည်။ ကောငျးကငျတမနျသငျသညျအပျေါရေးဆွဲမည်သို့မျှမကိစ္စကြောင့်ပါသေးသငျသညျအထူးအဓိပ်ပာယျကိုပေးတော်မူ၏။ ကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးထိုးအနုတ်လက္ခဏာအရာများအတွက်မခံမရပ်ပါဘူး။ သူတို့ဟာစိန်ခေါ်မှုများအထက်တွင်ရပ်နေသည်ကိုသို့မဟုတ်အသက်တာ၌တစ်ဦးအကျပ်အတည်းအတိတ်ရွေ့လျားအကြောင်းပြောဆို။ ဤရွေ့ကားတမန်ကိုတက်တူးထိုးအတူပါလာသောအဓိပ္ပါယ်များတချို့ရှိနေပါတယ်။
ကောင်းကင်တမန်များရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကိုလည်း wearer က၏အသုံးချနေသောလမ်းအပေါ်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လူတို့သညျသူတို့အလိုရှိကြသည်တွင်သောလမ်းအတွက်ကောင်းကင်တမန်ကိုစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်စဉ်တည်ငြိမ်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုအမြိုးသမီးမြားအပျေါကောငျးကငျတမနျအားဖြင့်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပါသည်။ အတောင်နှင့်အတူ, ကောင်းကင်တမန်များကွဲပြားခြားနားသောအရာတစ်ခုခုထွက်ရပ်တယ်။ ကောင်းကင်တမန်ကအထူးအဓိပ်ပာယျစေရန်မည်သည့်သင်္ကေတအပေါ်ထားရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏ကောင်းကင်တမန်သည်တက်တူးထိုးဘို့အသွားကြသည်သောအခါ, သင်ကဆိုလိုချင်သောအရာကိုရန်သင့်ကောငျးကငျတမနျဘာသာပြန်ဆိုညာဘက်စိတ်ကူးရှိသည်သောအလွန်အရေးကြီးသည်။
ကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးခွန်အားနှင့်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးသင်္ကေတကိုကိုယ်စားပြုသည်။ သငျသညျရှေ့တျော၌ကျောက်ဆူးတက်တူးမြင်ပြီလော ဤသည်တက်တူးထိုးသည့်စူမီးရီယန်တို့ကဤမျှလောက်များစွာသောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းစတင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံးတက်တူးတဦးဖြစ်လာသည်နှင့်လည်းအစောပိုင်းခရစ်ယာန်များကအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့သည်မိမိတို့ယုံကြည်ချက်၏နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းခဲ့ကြသောအခါဤဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောရေတပ်, အစွမ်းသတ္တိကိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံရေးအဖြစ်သင်္ဘောသားအေဂျင်စီအတွက်ရေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုပါဝင်သည်,
အဆိုပါကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးပုံပြင်များအများကြီးပြောပြရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ဒါဟာလက်ဝါးကပ်တိုင်သင်္ကေတများနှင့်လည်းသခင်ယေရှုခရစ်တော်နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာမိမိဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းကိုစကားပြောဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာအစမည်သူမဆို၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ကြောင်းပုလ်နှင့်ဣတ္အင်အားကြီးအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ ယနေ့ကျောက်ဆူးကအခြားအဓိပ္ပါယ်များပေးရသည်အခြားပစ္စည်းများနှင့်အတူ blended နိုင်ပါသည်။ ကျောက်ဆူးတက်တူးအသုံးပြုကြသည်ကအမှုရောက်သောကာလအတွင်းမှာဖော့နေဖို့နိုင်စွမ်းသင်္ကေတဖြစ်သောကြောင့်, တစ်ဦးဆက်ဆံရေးအသစ်ကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါ 21st ရာစုအတွင်းတက်တူးနှင့် ပတ်သက်. ဤမျှလောက်အမည်းစက်မရှိသကဲ့သို့, ကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးမှုကြောင့်၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုနှင့်ဆက်နွယ်အမှတ်လက္ခဏာတွေမှခေတ်ရေစီးကြောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းအတွင်းထင်ရှားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးကြောင်းတစ်ခုကျောက်ဆူးတက်တူးထိုးများအတွက်ဇာတ်လမ်းအမြဲရှိပါတယ်။ ဒါဟာအခြားသူများသူတို့အားပုံပြင်များကိုပြောပြနိုင်ပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကိုသာ wearer ဖြစ်ပါတယ်။
မြှား Tattoo ဓိပ်ပာယျ
မြှားဇာတိအမေရိကတိုက်၏သင်္ကေတအဖြစ်လူသိများသည်နှင့်တက်တူးထိုးအကြောင်းကိုပြောသွားသောအချက်များထဲကတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ မြှားကိုကူးသောအခါ, ကချစ်ကြည်ရေးနှင့်အခါဆော့ဝဲအစုအဝေး၌တည်ရှိ၏အခါတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ တစ်ဦးမြှားတစ်ဦးစိန်မှတဆင့်သွားသည့်အခါတစ်ဦးတိုက်ပိတ်မြှားကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအဖြစ်လူသိများနေသောကြောင့်ရဲစွမ်းသတ္တိအဖြစ်လူသိများသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ဦးစိန်သင်္ကေတမှတဆင့်ရေးဆွဲသောအခါ, ကရှေ့ကိုတဦးတည်းအပြောင်းအရွေ့အဖြစ်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ "သူတို့ကလည်းပြောပါ, တစ်ဦးကတိုက်ပိတ်မြှားအန်တရာယျမှကာကွယ်ရေးနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒါဟာလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်လမျးညှနျခ၏သင်္ကေတအဖြစ်သုံးနိုင်ပါသည်။ မြှားအေးမြစေနိုင်ပါတယ်နှင့် '' ဖော်ပြချက်ကျီအညီစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါသည်။ အရောင်, အ texture ကရေးဆွဲသောလမ်းလူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပေါ်တွင်မြှားတက်တူးကိုအကောင်းဆုံးများထဲမှစေသည်အရာဖြစ်တယ်။ တစ်ဦးမြှားတက်တူးထိုးနှင့်အတူ, အထီးသို့မဟုတ်အမျိုးသမီး chic ကြည့်ဖို့ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဒီဇိုင်းများအထိကြာနိုင်ပါသည်။ ငါးမြှားတစ်အစုအဝေးကိုအစှမျးသတ်တိကိုကိုယ်စားပြု, ဒါပေမယ့်တစ်ခုတည်းမြှားကိုအလွယ်တကူကျိုးပဲ့နိုင်ပါသည်။ မြှားတစ်အစုအဝေးကိုကိုချိုးဖျက်ဖို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ဖြစ်ပါတယ်။ မြှားသူတို့ရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းနှင့်လူအစုအဝေးထဲကရပ်နေ၏နည်းလမ်းတွေရှာကြသည်သောသူတို့အားအစွမ်းသတ္တိ၏ရင်းမြစ်ဖြစ်လူသိများကြသည်။
လိပ်ပြာဝိညာဉ်ရေးနှင့်ချစ်ခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ ဒါဟာ psyche နှင့်ပင်မေတ္တာ, အလိုဆန္ဒနှင့်ချစ်ခင်ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလိပ်ပြာအရှိဆုံးမင်းသမီးအမြဲကသူတို့အလောင်းတွေပေါ်လက်မှတ်ရေးထိုးရလိုသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအလွန်လှပရောင်စုံဖြစ်ပါတယ်။ ကလက်မှတ်ရေးထိုးအခါက exhumes အဆိုပါကြော့ရှင်းနှင့်မာနထောင်လွှားအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါဟာတက်တူးထိုးထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဆုံးဖြတ်တစ် wearer ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။
ချယ်ရီပွင့်တက်တူးအသက်တာ၏မခိုင်မြဲပုံကိုကိုယ်စားပြုခြင်းနှင့်လည်းအလှအပအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအကြောင်းအများကြီးပြောသွားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးများကချစ်ကြတယ်။ ဒါဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ၎င်းတို့၏ပုံပြင်များကိုပြောပြမယ့်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေနေကြသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်ချယ်ရီပွင့်တက်တူးထိုးရှေးခယျြတဲ့အခါ, သငျသညျလုယူဖျက်ဆီးတတ်ခဲ့ကြရပါမည်သူအချို့အဘို့အဆုံးရှုံးခဲ့ရချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းပြောနေတာနေကြသည်။ ဒါဟာအမျိုးမျိုးသောစတိုင်များနှင့်ပုံစံမျိုးစုံအတွက်လာများနှင့်အများအားဖြင့်ကရေးဆွဲခဲ့သည့်အနေဖြင့်ယဉ်ကျေးမှုအရသိရသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခစျြတဲ့သူကလူအများကြီးအရာတွေအများကြီးဖော်ပြ၏အသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့ပင်ယောက်ျားကသူတို့မိတ်ဖက်မေတ္တာရှင်မှကြွလာသောအခါသူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းပြရန်ဤချယ်ရီပွင့်တက်တူးထိုး inking နေကြသည်။ က Luck, မတ်ေတာသညျ, မမြဲ, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်, အလှအပ, ပျက်စီးလွယ်သော, ခွန်အား, Nobility, သက်တမ်းတိုး, ေူပာင်းလဲရေးနှင့်သာယာဝပြောရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြောသွားသကဲ့သို့လည်း၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူကိုက်ညီရန်။ အပွင့်လည်းနွေဦးရာသီမှာတှေ့မွငျရသောသက်တမ်းတိုးနှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ပါတယ်။ နွေဦး၏တစ်ဦး harbinger အဖြစ်, ချယ်ရီပန်းတွေ, ကောက်ပဲသီးနှံများနှင့်ကြမ်းတမ်းသောဆောင်းရာသီပြီးနောက်ဘဝတောက်ပပြန်လာ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကောင်းသောစပါး၏သင်္ကေတဖြစ်တယ်။ အဆိုပါသင်္ကေတဟာတက်တူးထိုးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးတွေလူမျိုး၏အကြိုက်ဆုံးတွေထဲကစေသည်အခြားအရာဖြစ်၏။
ကလူသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးထိုးသွားပါအကြောင်းပြချက်တစ်ခုမှာကြောင့်ထိုသို့ပြုကိုယ်စားပြုအဘယျသို့ဖွစျသညျ။ သံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ရေကိုအပေါ်နေသောသူတို့အား, တကယ့်အဖိုးတန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကောင်းသောကံ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်ထောက်ပံ့ရေး၏လက္ခဏာသက်သေကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးမူကွဲနှင့်စတိုင်များအမျိုးမျိုးအတွက်လာပါတယ်။ အဆိုပါ wearer မှရှင်းလင်းချက်တွေအများကြီးရှိသည်, ဤတက်တူးအမျိုးအစားများရှိပါတယ်။ တဦးတည်းရဲ့အိပ်မက်ကိုအောက်ပါသည်သင့်ကိုတက်တူးထိုးများ၏အဓိပ္ပါယ်များတစ်ခုဖြစ်သည်။ သငျသညျကိုအခြားသူများသိဘဝ၌သင်တို့၏ရပ်တည်ချက်စေရန်ဝေးရွှေ့ဖို့မလိုပါ။ သငျသညျအသံအောင်မပါဘဲကမ္ဘာကြီးသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်အဘို့ဤတက်တူးနှင့်အတူလွယ်ကူသည်။
သင်ပထမဦးဆုံးဥပမာပြောရရင်အတွက်တက်တူးထိုးလက်မှတ်ရေးထိုးကြပါပြီအဘယျကွောငျ့ရဲရငျ့စှာတက်တူးထိုး၏ကိုယ်ကိုမဆိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပေါ်ဆွဲသင်ပြောပြသည်။ ဒါဟာကောင်းသောကံ၏လက္ခဏာသက်သေကိုလည်းလမ်းညွှန်မှုနှင့်ဦးတည်ချက်ကိုဆိုလိုတာပါ။ ဤသည်သံလိုက်အိမ်မြှောင်များ၏ရုပ်ပုံများကိုအများကြီးသင်္ဘောပေါ်တွင်ခြယ်သတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခြင်း၏လူကြိုက်များသင်ကမဆိုကြည့်ရှုတဲ့အခါသင်တန်ဖိုးထားမယ်လို့တစ်ခုခုပါပဲ။ ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, ကမရှိတော့က၏အသုံးချနေကြသူလူတို့သညျဒါပေမယ့်လည်းဖက်ရှင်ကိုကြည့်ချင်သူမင်းသမီးဖြစ်ပါတယ်။
နဂါး Tattoo ကိုဆိုလိုတာ
ဒီတက်တူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲ? လူတွေတစ်ဦးကစာရေးနဂါးတက်တူးထိုးဘို့ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိသည်။ သို့သော်အထင်ကရတက်တူးဒီဇိုင်းကောင်းသောသတင်းများ, ကံ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်သာယာဝပြောဆိုလိုနိုင်ပါ။ မှော်, ဉာဏ်, စစ်သည်တော်, လောဘ, ပါဝါ, မွေးဖွား, duality, ဉာဏျပညာအစှမျးသတ်တိ, ရက်စက်, ဝိညာဉ်ရေး, ပျော်ရွှင်မှုနှင့်များစွာသောအခြားအဓိပ္ပါယ်များကဲ့သို့အခြားအဓိပ္ပါယ်များနေဆဲရှိပါတယ်။
သငျသညျကိုရပ်တန့်နှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်များဝယ်လိုအားချင်အောင်သာအနည်းငယ်တက်တူးရှိပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောတက်တူးတစ်ခုမှာကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ inking စဉ်အမျိုးမျိုးသောပုံစံမျိုးစုံလာမူကွဲနှင့်စတိုင်များအတွက်အားဖြင့်နဂါးအဓိပ္ပာယ်ကိုကြွလာသောနဂါးတက်တူးဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူများကလည်းသူတို့ရဲ့အရသာမှခြွင်းချက်နှင့်စိတ်ကြိုက်ကြည့်ရှုစေရန်မိမိတို့၏နဂါးတက်တူးထိုးဖို့အရောင်များကိုထည့်ပါ။ ဤသည်တက်တူးထိုးကိုယ်ခန္ဓာ၏မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အပေါ်ထားရှိနိုင်ပြီးနေဆဲထိုသို့ပြုမှဆိုလိုသောပုံပြင်ကိုပြောပြလိမ့်မယ်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခြင်း၏အရေးပါမှုနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုကကြီးမြတ်တက်တူးခစျြတဲ့သူကလူအများကြီးကိုဆွဲဆောင်ရာဖြစ်တယ်။
ဒါဟာအစအစှမျးသတ်တိနှငျ့ဉာဏျပညာ၏သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။ အချို့လူများကလောဘကြီးပြီးမကောင်းတဲ့အတိတ်နိမိတ်အဖြစ်ကယူပါ။ နဂါးဉာဏျပညာ, အကောင်းကံများနှင့်ချစ်ကြည်ရေးအဖြစ်တရုတ်အားဖြင့်စဉ်းစားသည်။ ဂျပန်ကနေသူတို့အဘို့, သူတို့ကနဂါးချိန်ခွင်လျှာကြောင်းထင်ပါတယ်။ မကြာခဏသရဖူနှင့်ရာဇပလ္လင်နှင့်အတူရေးဆွဲသောဆဲလ်တစ်နဂါးတန်ခိုးနှင့်အစွမ်းသတ္တိကိုကိုယ်စားပြုတယ်။
ဆင်တက်တူးထိုးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးကိုကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ဆင်ငြိမ်းချမ်းရေး, တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်အာဏာကိုဆိုလိုတာနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာဆက်သွယ်ရေး, ပညာ, အကောင်းကံများနှင့်အောင်မြင်မှုအဘို့ရှာသောသူတို့၌ရန်သင်္ကေတဖြစ်ပါသည်။ အခြားသူများကိုဆည်းကပ်, ထည့်သွင်းစဉ်းစား, သည်းခံခြင်းနှင့် chastity အဖြစ်ယူနေချိန်မှာတချို့လူတွေကကလေးမွေးဖွားအဖြစ်ကစဉ်းစားပါ။
ဆင်လည်းတိမ်နှင့်သာယာဝပြောရေး, nobility, ပျော်ရွှင်မှုကို, မှတ်ဉာဏ်, ပြဌာန်းခွင့်နှင့် invisible နှင့်အတူတွဲပြီးစဉ်းစားနေကြသည်။ ဆင်တက်တူးကွဲပြားခြားနားသောပုံစံမျိုးစုံနှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာ။ သို့သော်ကတက်တူးထိုးထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဆုံးဖြတ်တစ် wearer ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတက်တူးထိုးချစ်သောသူလူတိုင်းအဓိပ္ပာယ်ကိုမှ preference ကိုရှိပြီးသူတို့လက်မှတ်ရေးထိုးနေကြသည်သောအရပ်မှာတက်တူးထိုး၏အသုံးချနေတဲ့သာသင်ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါဆင်သာယာဝပြောရေး, မှတ်ဉာဏ်, ကိုယ်စားပြုတယ် ?? ပျော်ရွှင်မှု, ?? Nobility, ?? ပြဌာန်းခွင့်, ဘယျသူမှမအောငျနှင့်သနားကြင်နာခြင်း။
ယောက်ျားနှင့်မိန်းမအဘို့အစစ်ဆေးမှုများနောက်ဆုံးပေါ် Koi ငါးတက်တူးဒီဇိုင်းအယူအဆအတွက်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။
ခြင်္သေ့သည် Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
ခြင်္သေ့သည်တက်တူးထိုးသည်၎င်း၏ကြည့်နဲ့မာနထောင်လွှား, ရဲစွမ်းသတ္တိ, မူပိုင်နှငျ့ခှနျအားအကြောင်းကိုဆွေးနွေးအမြဲကွမျးကွုဖြစ်ပါတယ်။ ယဉ်ကျေးမှုအရသိရသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ ခြင်္သေ့သည်လည်းသန့်ရှင်းစင်ကြယ်, ပါဝါ, သတ္တိ, ရဲစှမျးသတ်တိ, သစ္စာရှိမှု, Nobility, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, ရိုးသားမှု, ခွန်အား, သမာဓိနှင့်အာဏာပိုင်ဆိုလိုနိုင်ပါ။ ခြင်္သေ့သည်တက်တူးထိုးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကလူအများကြီးအမြဲသူတို့ inking နေကြတယ်ဆိုတာကိုများ၏အရေးပါမှုကိုသိရန်လိုရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါအနုပညာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မဆိုအနုပညာလက်ချောင်းနဲ့တူပင်အသေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။
ခြင်္သေ့အကြောင်းပြောနေတာအတွက်ရှုထောင့်ကသူတို့ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကိုခံရဖို့အကောင်းဆုံးတက်တူး၏တဦးတည်းဖြစ်စေခြင်းငှါအဘယျသို့ဖြစ်ကြသည်။ အနောက်နိုင်ငံများနှင့်တွေ့ဆုံရန်လာမယ့်နေထွက်နှင့်နေဝင်ချိန်သို့မဟုတ်ပင်အရှေ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြ back ပြန်ပြသကြသည်ခြင်္သေ့နှစ်ကောင်။ Lion ကိုလမ်းညွှန်မှုအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပြီးကမ္ဘာတဝှမ်းအချို့သန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်လေးစားဖွယ်သောနေရာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါတက်တူးထိုးသိပ်အရာတွေအများကြီးကိုဆုံးဖြတ်ရန်နှင့်တကွကြွလာသောအရောင်များ။ သင်ကတက်တူးထိုး၏အရောင်နဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။ customization ကျနော်တို့ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်ခြင်္သေ့၏အမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်ကိုတွေ့မြင်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအလွန်အရေးကြီးပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခြင်း၏ဖန်တီးမှုရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။
Lotus တက်တူးရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်နှင့်၎င်းတို့၏အဓိပ္ပါယ်ရှိသောတက်တူးထိုးဒီဇိုင်းများသူတို့ကိုအံ့သြလောက်အောင်ကြောက်မက်ဘွယ်စေပြီ။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခြင်း၏အရောင်များကြာတက်တူးထိုးကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များပေးဘာတွေလုပ်နေလဲ။ စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့်ဝိညာဉ်ရေးနှင့် ပတ်သက်. ဝှိုက်ကြာတွေ့ဆုံဆွေးနွေး။ ဒါဟာသိပ်စုံလင်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
သင်ကြည့်ရှုလမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုတက်တူးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ဥပမာအမျိုးမျိုးသောပုံသဏ္ဍာန်နှင့်အရွယ်အစားအတွက်လာသောအမွေးကိုယူပါ။ ကိုယ်ခန္ဓာ၏မဆက်ဆံအမွေးတက်တူးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကဘာလဲဆိုတာ။ အထဲတွင် fit ပါဘူးကြောင်းရှိသနည်း လူတွေအများအပြားသည်ကွဲပြားခြားနားသောအဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ Lotus တက်တူးကလူကိုအလွယ်တကူထိုသူတို့အဘို့ဒီချစ်စရာကောင်းတဲ့တက်တူးထိုးဖို့အဓိပ္ပာယ်ကိုတွေအများကြီးမြင်သောသူအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးသူတွေကိုသွားရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သောအံ့ဘွယ်။ ဒါဟာမေတ္တာ, အောင်မြင်မှု, ကောင်းသောကံ, အတားအဆီးများနှင့်လည်းအန္တရာယ်များကိုဆီးတားနိုင်စွမ်း၏အခြားအံ့သြဖွယ်အဓိပ်ပာယျစေရန် Koi ငါးနှင့်အတူရေးဆွဲနိုင်ပါသည်။
Feather Tattoos ၏အဓိပ္ပာယ်ကို
ကငှက်များနှင့်အတူဆက်နွယ်သောကြောင့် Feather တက်တူးထိုးလွတ်လပ်မှုကိုတစ်ဦးအယူအဆဆိုလိုနိုင်ပါ။ Birds ဂိမ်းအခမဲ့တိရိစ္ဆာန်များအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်နှင့်သူတို့ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်အခြားမှပျံသန်းနိုင်သည်ဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းသို့မဟုတ်ပင်မျိုးစုံအမွေးအတောင်လွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်အမွေးအညီအမျှလှုပျရှားမှု, အတွေးအခေါ်များ, အပြန်အလှန်နိုင်စွမ်းနှင့်ပညာတတ်များ၏ဒြပ်စင်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။ အမွေးအတောင်တို့သည်ရွေ့သွားကြပြီသောသူတို့က, သေလွန်သောသူတို့သည်အတူကွန်နက်ရှင်ကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။
Feather တက်တူးသင်တို့ပတ်လည်ကြည့်ရှုနိုင်သောအကောင်းဆုံးသောတက်တူးတချို့ရှိနေပါတယ်။ ဒါဟာရှားပါးနှင့်အထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဒီတက်တူးမြင်သောလူတိုင်းအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ သင်နှင့်အတူသင့်ရဲ့လွတ်မြောက်မှုကိုရှာတဲ့တက်တူးဒီဇိုင်းကိုရှာဖွေနေကြသောအခါ, ဒီတက်တူးထိုးရိုးရိုးကြောင့်အလှအပနှင့်အရေးပါမှု၏အဘို့သွားကြဖို့တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကအစကောင်းကင်မှပြုတ်ကျလက်ဆောင်တွေကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ အဆိုပါအမွေးအတောင်လည်းလွတ်လပ်မှု, အမှန်တရား, အခြားဘက်ခြမ်းနှင့်အတူအလင်းမြန်နှုန်း, တက်မြန်းသည့်နေ့များ, လေယာဉ်, အမြင့်ဝိညာဉ်အိပ်မက်များ, သန့်ရှင်းစင်ကြယ်, ရဲစှမျးသတ်တိ, ကတိ, သတ္တိ, မျှော်လင့်ခြင်း, ဆက်သွယ်ရေး, စိတ်ဝိညာဉ်၌၏ခရီး, ခရီးသွား, မှော်, လေဝိသား, အလေးခြိဆိုလို။ တက်တူးလှလှပပသင်လိုအပ်ကြောင်းကိုဝိသေသလက္ခဏာပေးရဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ သင်ကြည့်ရှုလမ်းကိုပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်အသုံးပွုနိုငျကွောငျးကိုတက်တူးအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။
ဇီးကွက် Tattoo ဓိပ်ပာယျ
ဇီးကွက်တက်တူးထိုးသည့် shadow ပင်မှောင်မိုက်သို့မဟုတ် Walker ၏နက်နဲသောအရာကိုချစ်သောသူတို့အားအဘို့ဖြစ်၏။ ဇီးကွက်တက်တူးညဉ့် Sentinel နှင့်သိနေကြသည်မဟုတ်သောသူတို့၏အမှုအရာများ၏ဘုံကိုယ်စားပြုအသုံးပြုသည်။
ဇီးကွက်ကြောက်မက်ဖွယ်သို့မဟုတ်မှေးမှိန်လာအချိန်လေးအတွက်မျှော်လင့်ချက်ကိုကိုယ်စားပြုတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အံ့သြဖွယ်ရူပါရုံညဉ့်အတွက်ဇီးကွက်၏အစွမ်းထက်အယူအဆကလူက endears ။ ဒါဟာအလင်းဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအဆုံးတွင်ရှိသောသက်သေခံချက်ကိုဆိုလိုနိုင်ပါ။ တစ်ဦးတက်တူးထိုးခြင်း၏အဓိပ္ပာယ်ကိုပါဝါ, မှော်, အိပ်မက်, ရှင်းလင်းပြတ်သား, လမ်းညွှန်မှု, ပင်ကိုယ်, ပညာ, အသိပညာနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာအစကို Magic ဆက်သွယ်မှု, အစွမ်းသတ္တိ, ပိုကောင်းတဲ့အိပ်မက်တွေကိုဆိုလိုသည်။ အဆိုပါဇီးကွက်ဤမျှလောက်များစွာသောနည်းလမ်းတွေထဲမှာရေးဆွဲနိုင်ပြီးသူတို့သည်သင့်ခစျြလိမျ့မညျကွီးအဓိပ္ပါယ်များနှင့်အတူတက်အဆုံးသတ်။ အဆိုပါဇီးကွက်တက်တူးထိုးကွယ်လွန်နှင့်လည်းငါတို့အားလုံး၎င်း၏လေးရယ်မှယခုဘဝအသက်ရှင်နေထိုင်သင့်ကြောင်းသူတစ်ဦး၏သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။
မြည်၏ဒီဇိုင်းများကိုလည်းမကြာခဏမက္ကဆီကန်ဇီးကွက်တက်တူးထိုးခြင်းသို့မဟုတ်သကြားလုံးဇီးကွက်တက်တူးထိုးဟုခေါ်ဝေါ်သောနာမည်ကျော်သကြားဇီးကွက်တက်တူးထိုးကဲ့သို့မိမိတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိသည်။ အဆိုပါမက္ကဆီကိုကြောင့်ထိုသို့ပြုနေရာသောအခန်းကဏ္ဍများသေတက်တူးထိုးများ၏ Day ကိုကိုချစ်ဥပမာကိုယူပါ။ တခြားနားချက်အောင်ကိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဤဆွဲနိုင်သည်ကိုအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများရှိပါသည်။ ထိုနေ့၏အဆုံးမှာသူကအလွယ်တကူတက်တူးထိုးဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုတာအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပါတယ်သူ wearer ဖြစ်ပါသည်။
နှင်းဆီ Tattoo အဓိပ္ပာယ်ကို
နှင်းဆီမေတ္တာတော်ကိုသရုပ်ဖော်သည်။ မေတ္တာ၌နေသောသူတို့ကိုအလွယ်တကူနှင်းဆီတက်တူးနှင့်အတူခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အစေ့တို့သည်ဆူးပင်ရှိပါသည်အခါနှင်းဆီဆူးပငျနှငျ့အတူမဖြစ်တဲ့အခါ, သူကဒါဆိုမေတ္တာရှင်အခါလုပ်ခံရဖို့အဘယ်သူမျှမယဇျပူဇျောရှိကွောငျးကိုဆိုလိုသည်, ဖန်ဆင်းခံရဖို့ယဇျပူဇျောလည်းမရှိကိုဆိုလိုသည်။ အဆုံးမဲ့အလှတရားလည်းအချို့သောလူများဆိုလိုနိုင်ပါတယ်ထရာဖြစ်တယ်။ တချို့ကသင်္ဘောသားဖြစ်သောကြောင့်ယင်း၏အထူးရည်ရွယ်ချက်၏ဤတက်တူးကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒါဟာအစအများအားဖြင့်ရေကြောင်းခရီးရှည်ကာလအတွင်းကျန်ရစ်ကြသူအထူးမင်းသမီးကိုရည်ညွှန်းကြောင်းဣတ္ဆက်စပ်နေပါတယ်။ တောင်မှတချို့နတ်ဖုရားကဒီတက်တူးနှင့်အတူဖော်ထုတ်နေကြပါတယ်။ နှင်းဆီလည်းဟန်ချက်အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သွားကြောင်းနှင်းဆီပန်းကိုသာမင်းသမီးသည်အခါရက်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်။
ယနေ့ပင်ယောက်ျားကသူတို့မိတ်ဖက်မေတ္တာရှင်မှကြွလာသောအခါသူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ကောင်းပြရန်ဤတက်တူးထိုး inking နေကြသည်။ ဒါဟာမေတ္တာသည်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်တစ်ဖန်ပြန်လည်မွေးဖွားခြင်း, ဝိညာဉ်ရေးနှင့် Soul, ေူပာင်းလဲရေးကို, ဝိညာဉ်ရေးနှင့် Soul, ကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ဣတ္ဆိုလိုသည်။ ကလက်မှတ်ရေးထိုးအခါက exhumes အဆိုပါကြော့ရှင်းနှင့်မာနထောင်လွှားအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ဒါဟာတက်တူးထိုးထားရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဘယ်မှာဆုံးဖြတ်တစ် wearer ၏လုပျငနျးဖြစ်ပါတယ်။ ။ အဆိုပါအနုပညာချစ်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်ပြီးခန္ဓာကိုယ်မဆိုအနုပညာလက်ချောင်းနဲ့တူပင်အသေးဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုဖုံးလွှမ်းနိုင်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးခြင်း၏ဒေသခံအရေးပါမှုကလက်မှတ်ရေးထိုးသူကအကြောင်းထင်လမ်းကိုအပေါ်မူတည်ပါသည်။
လူမျိုးစုတက်တူးထိုးအတားအဆီးကိုကျော်လွှားရန်ခွန်အားသို့မဟုတ်ရဲစွမ်းသတ္တိကိုကိုယ်စားပြုသည်။ လူမျိုးစုများ၏အဓိပ္ပာယ်ကိုယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်နေရာများကိုသို့မဟုတ်ပင်ဒေသခံများထံမှထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ တချို့လူတွေကတက်တူးကတဆင့်သူတို့ရဲ့မှတ်ပုံတင်ရတဲ့အခါရှေးဟောင်းနေ့ရက်ကာလ၌စတင်ခဲ့သည်။ လူမျိုးစုတက်တူးထိုးဝိညာဉ်ရေးရာသို့မဟုတ်ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာပြောက်ကျားအဖြစ်သို့မဟုတ်ပင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးများအတွက်အသုံးပြုသည်။ ဒါဟာအဘယ်သူမျှမလူမျိုးစုတက်တူးထိုးရာမှလာသောကနေအမြိုး မှလွဲ. ပြောပြနိုင်ကြစေနိုင်ပါတယ်ပွောပုံပြင်များလည်းအသုံးပြုပါသည်။ သငျသညျကိုအခြားသူများသိဘဝ၌သင်တို့၏ရပ်တည်ချက်စေရန်ဝေးရွှေ့ဖို့မလိုပါ။ သငျသညျအသံအောင်မပါဘဲကမ္ဘာကြီးသင့်ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြောပြရန်အဘို့ဤတက်တူးနှင့်အတူလွယ်ကူသည်။
ဝံပုလွေတက်တူးထိုးလွတ်လပ်မှုကိုရှာဖွေနေသူအကြောင်းပြောဆိုရန်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတက်တူးထိုးလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေတ္တာနှင့်လေးစားမှု, အစွမ်းသတ္တိ, သမာဓိရှိကိုဆိုလိုသည်။ ဝံပုလွေလည်းပိုပြီးရိုင်း, မိသားစု, ပါဝါ, ဗီဇ, ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, လွတ်လပ်မှု, ရှင်သန်မှုနှင့်စာရေးဆိုလိုနိုင်ပါ။ ။ ဆိုက်ဘေးရီးယား lore ခုနှစ်, ဝံပုလွေသားသမီးများ၏အပြစ်ကင်းစင်ကာကွယ်ပေးရန်အပေါ်သို့ဟုခေါ်သည် - အထူးသဖြင့်ကျန်းကျန်းမာမာကလေးမွေးဖွားအာမခံထားဖို့မဖြစ်၏ဖြစ်ပါတယ်။ အဟောင်းကို Eurasia ခုနှစ်, ဝံပုလွေလျှို့ဝှက်ချက်များကိုတစ်ဦးကာကွယ်ခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်တစ်ခုဝံပုလွေပြောသည်လျှင်ရသည်မှာ, သင်ဝံပုလွေအစဉ်အမြဲသိကျွမ်းခြင်းပညာကိုကာကွယ်ရန်မယ်လို့စဉ်ကတင်ဆောင်လာသောများ၏ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ခဲ့ကြသည်။
သူတို့ဗီဇအတိုင်းယုံကြည်သောကြောင့်ဝံပုလွေတက်တူးထိုးဘို့အသွားသူတွေကိုစိတ်အားထက်သန်မှုကအုပ်ချုပ်ကြသည်မဟုတ်။ သူတို့နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်အစွမ်းထက်ပြသရန်ချစ်သူများမှင်ဒီတက်တူး။ တောခွေးကွယ်လွန်သွားကြပါပြီသူမြား၏ကာကွယ်ဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်နေသည်။ ဒါကသူတို့မကြာခဏသင်္ချိုင်းသို့မဟုတ်ဂူပေါ်တွင်တွေ့မြင်နေကြသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါသည်။
ကငျးမွီးကောတက်တူးrip တက်တူးလက်မောင်းတက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးလိပ်ပြာတက်တူးခြေကျင်း Tattoosခြင်္သေ့သည်တက်တူးဟင်္တက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးတက်တူးထရေဘဝဲတက်တူးလည်ပင်းတက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးFeather Tattooစိန်တက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးနေရောင်တက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးစုံတွဲတက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးချစ်စရာတက်တူးကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးနောက်ကျောတက်တူးလတက်တူးကျောက်ဆူးတက်တူးKoi ငါးတက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလက်တက်တူးချယ်ရီပွင့်တက်တူးငှက်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများအစ်မတက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးခြေလျင်တက်တူးရင်ဘတ်တက်တူးမျက်စိတက်တူးပန်းချီတက်တူးဆင်တက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးကြောင်တက်တူးနှလုံး Tattoosဂီတတက်တူးလက်တက်တူးမြှားတက်တူး